१० वर्षमा आमिर खानको कति फिल्म फ्लप? « LiveMandu
१० वर्षमा आमिर खानको कति फिल्म फ्लप?
११ भाद्र २०७८, शुक्रबार ००:००
काठमाण्डौ । अभिनेता आमिर खान बलिउडमा सफल कलाकार मानिन्छन । यिनले अभिनय गर्ने फिल्मले दर्शकको मन जित्दै आएका छन् । चाहे पिके होस् या दंगल आमीरलाई दर्शकले मात्र हैन क्रिटिक्सले पनि तारिफ गर्दै आएका छन् । यिनै आमीरको एक दशमा तीन फिल्म फ्लप भएका छन् ।
आमिरले १० वर्षमा नौ फिल्ममा अभिनय गरेका थिए, जसमा तीन फिल्म धोबिघाट, तलास र ठग्स अफ हिन्दुस्तान फ्लप भए । यी फिल्मले लगानीको तुलनामा केही मुनाफासमेत कमाए । तर, पनि फिल्मलाई बक्स अफिसमा फ्लप नै मानियो ।
मिस्टर पर्फेक्ट पनि यी फिल्मलाई राम्रो बनाउन चुकेका छन् । आमिरले तलाशलाई लिएर प्रचार गरे पनि अन्ततः फिल्मलाई फ्लप नै घोषणा गरिएको थियो । यिनै आमिर पछिल्लो समय टम ह्यांक्सको सफल फिल्म ’फरेस्ट गम्प’ को हिन्दी रिमेक ’लाल सिंह चड्डा’ को काममा व्यस्त छन् ।